စည်းကျော်လာပြီမို့ Beyond the limit.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » စည်းကျော်လာပြီမို့ Beyond the limit..
စည်းကျော်လာပြီမို့ Beyond the limit..
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Oct 26, 2014 in Opinions & Discussion | 13 comments
အရာရာတိုင်းမှာ လစ်မစ် limit ရှိတယ် ရဲဘော်တို့.. သီးခံမှုဆိုတာ အတိုင်းအတာ ရှိတယ် အဲဒီက ကျော်တာ ငြိမ်ခံနေလျင် သည်းခံတာ မမြည်ဘူး၊ လည်စင်းပေးရာ ရောက်ပြီ။ တဖက်က နားမလည်တဲ့အပြင် ငတုံး ငအ အဖြစ် သတ်မှတ်တယ်။ သတင်းထောက် ကိုပါကြီး အသတ်ခံလိုက်ရပြီ။ သတ်သူက စစ်တပ်.. ပြောတော့ တိုင်းပြည်မှာ ငါတို့မရှိရင် ဥပဒေမဲ့ ဖြစ်သွားပါမည်ဆိုပဲ။ ကိုပါကြီးသေပြီး တလလောက်ကြာမှ ထွက်ပြေးလို့ ပစ်သတ်ရပါတယ် သတင်းထုတ်တယ်။ ကိုပါကြီး ဒီကေဘီအေကို အင်တာဗျူးသွားစဉ် အဲဒီမှာ စစ်ဝတ် အပြည့်အစုံနဲ့ ရိုက်ထားပြတဲ့ ဓာတ်ပုံကိုယူပြီး ရန်သူစစ်တပ်ကလို့ စစ်ခွေးတွေ ဆင်ခြေပေးတယ်ဘယ်သူ ဖြေရှင်းပေးမှာလဲ..။ ဘပြောင်ဂျီး အစိုးမရလား.. ကုတ်ခြာ မင်းအောင်လှိုင်လား.. မဲလိမ်လွှတ်တော် အုတ်ကထတွေလား..။ တရားမျှတမှုအတွက် ဘယ်သူ ဦးဆောင် တိုက်ပွဲဝင်ပေးမလဲ.. ဘွားဒေါ်ဂျီးလား.. ရှစ်ပူးငြိမ်းပွင့်တွေလား..။ (အစည်းအဝေးလုပ်တာတော့ တွေ့ပြီ)
သင်ပုန်းချေတာ ကောင်းတယ်။ အမျိုးသား ပြန်လည်ရင်ကြားစေ့ရေးအတွက် ခွင့်လွှတ်မှု အရင်းခံရပါမည်။ သို့ပေမဲ့ ဆက်ဖြစ်နေတဲ့ မတရားမှုတွေ၊ နာကျည်းခံပြင်းချက်တွေကို ရပ်တန့်ရမည်လေ။ သင်ပုန်းချေရေး တစာစာအော်ခဲ့ကြတဲ့ သပ်ပါတီတွေ နိုင်ငံရေးသမားတွေ ပြင်ညာရှင်တွေအားလုံး တာဝန်ယူရမည်။ ဘဝတူ မီဒီယာသမားတွေ ကျရာတာဝန် ထမ်းကြပါ၊ တပ်ဦးမှာ နေပေးကြပါ။ စာနယ်ဇငး ကောင်စီ ဒါမှ မရှင်းနိုင်လျင် စာလည်စင်းကောင်စီ နာမည်ပြောင်းတော့.. ။
စာနယ်ဇင်းသမားတွေ ထောင်ကျနေတယ်၊ အချုပ်ခံနေရတယ်၊ အချို့လည်း တရားရင်ဆိုင်နေရတယ်။ အခု အသတ်ခံလိုက်ရပြီ။ လွတ်လပ်စွာ ရေးသားပြောဆို ထုတ်ဝေခွင့်အတွက် တိုက်ပွဲဝင်ကြ။ တရားမျှတမှု၊ တန်းတူညီမျှရေးနဲ့ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာအတွက် ရုန်းကန်ကြ.။ ပြည်သူ့ခုံရုံးတွေဖွဲ့ဖို့ လိုအပ်ပြီ။
ယူအက်စ်မှာ ကိုပါကြီးရဲ့ ကျန်ရစ်သူ မိသားစုအတွက် ရံပုံငွေလှုပ်ရှားမှု စနေပြီ။ မိန်းမနဲ့ ခလေးတွေကျန်တယ်။ ပြည်တွင်းမှာ သူတို့အတွက် ရံပုံငွေ fund ထူထောင်ပေး၊ စောင့်ရှောက်ရေးကော်မတီ ဖွဲ့ပေးကြပါ။ ဒီမိုသမား ကျတဲ့ သွေးတစက် အလကား မဖြစ်စေရ..။
အာဇာနည်မျိုး သေရိုးမရှိ…။ ကျဆုံးရဲဘော် ကိုပါကြီးအား အလေး ပြု…။ တော် တီး တော်…
စစ်တပ် လူတန်းစား နဲ့ ပြည်သူ (စစ်တပ် အုပ်ချုပ် မှု ကို မလိုလား တဲ့ ပြည်သူ) တွေ ကြား မှာ နောက်ထပ် ပြည်သူ (စစ်တပ် ကိုလဲ မကြိုက် ၊ အာလဲ မခံ ရဲ) ဆိုတဲ့ လူတန်းစား ဆိုတာ ရှိတယ်။
အဲဒီ အလွှာ က စကားဝဲ ပြီး အနင်းခံ ပြည်သူ တွေ ဘက် က မရပ်ရဲ သမျှ ဘာမှ မထူး ပါ ကိုကြောင်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ချည်း ခေါင်းခံခိုင်း ပြီး ပုံချ နေလို့ မရ။
ကြားက စကားဝဲ နေတဲ့ မလှုပ် မရှုပ် မပြုတ် လူတန်းစား ကို ဘယ်လို ဆွဲခေါ် မလဲ စဉ်းစားရမှာ။
စစ်တပ် လူတန်းစား နဲ့ ပြည်သူ (စစ်တပ် အုပ်ချုပ် မှု ကို မလိုလား တဲ့ ပြည်သူ) တွေ ကြား မှာ နောက်ထပ် ပြည်သူ (စစ်တပ် ကိုလဲ မကြိုက် ၊ အာလဲ မခံ ရဲ)
အဲ့ဒီ့ကြားသိပ်မရှိပါဘူး အရီး ရဲ့  .. သန်းငါးဆယ် လောက်ပါဘဲ..
မကြိုက် ရင် မကြိုက် ကြောင်း အာခံ နေ တဲ့ လူတန်းစား နဲ့
မကြိုက် လဲ ရှေ့ကျ မျက်နှာချိုသွေး ဖား နေ ကြတဲ့ လူတန်းစား ကို ပြောတာပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ သန်း ၃၀ လောက် ဖြစ်သွားမှာထင်ရဲ့။
၈လေးလုံးကာလ နဲ့ ၂၀၁၂ကြားမှာ ဒီမိုကရေစီအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ရင်း
(တကယ်ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပြီးလုပ်ခဲ့တဲ့သူတွေပြောတာ) လူမသိ သူမသိနဲ့
ဘ၀ဆုံးသွားသူ အသက်ဆုံးပါးသွားသူတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။
သူတို့ကိုလည်း မမေ့ သင့် ဘူးထင်ပါတယ်
တကဲ့ စိတ်ရင်း ထဲ က အကြောင်း ထပ်ပြောချင်ပါတယ်။
ကျွန်မ က ကြားလူ အမြင် နဲ့ ပြောမှာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ထိ လို့ နာ လို့ ပြောတယ် လို့ လဲ မမှတ်ပါနဲ့။
အကြောင်းအရာ တစ်ခု ကို ပိုပြီး အကျယ် မြင်ချင်ရင် Box အပြင် ကို ထွက်ကြည့် လို့ ကြားဘူးလို့ပါ။
အခု ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းမှာ လက်ရှိ ဖြစ်သင့်တာ ကို ဘဲ အာရုံစိုက်သင့်တယ်။
သဘောက လူ တစ်ယောက် ကို စစ်တပ် က ပစ်သတ် တာ ကို ဘဲ အဓိက ထား ပြောသင့်တယ်။
ဒီ အတွက် စုံစမ်းရေး လုပ်ပေးဖို့ အဓိက ထား တောင်းသင့်တယ်။
ကိုယ့်ဘက်က ဥပဒေ အပြင်ကနေ ဘာမှ မလုပ် မိဖို့ ဂရုပြုသင့်တယ်။
ဒီအချိန်မှာ နဲနဲ လှုပ်ရင်တောင် အတိမ်းအစောင်းမခံ တဲ့ အချိန်မို့ ပါ။
ကာချုပ် တစ်ယောက် အနေ နဲ့ တာဝန်ယူပြီး ဒီ ကိစ္စ ကို ကျောသား ရင်သား မခွဲ ဖြေရှင်း ပေးဖို့ ကို တောင်းဆို ရမှာ။
ဒီမှာ တာဝန်ယူခြင်း/ မယူခြင်း က သူဘာလဲ ဆိုတာ ကို ပြမှာဘဲ။
မြန်မာပြည် မှာ ဥပဒေ ဆိုတာ ကို စောင့်သိဖို့ အတွက် တာဝန်ရှိသူ တွေ က လဲ တာဝန်မယူဘူး။
လိုက်နာရမဲ့ ပြည်သူ တွေ ကလဲ တစ်ဦးချင်း ကိုယ့်တာဝန် မယူဘူး။
ဒီမိုကရေစီ ဆိုတာ တောင်းယူလို့ မရဘူး။
တိုက်ယူရတာ ဆိုရင် လက်နက်စွဲ အကြမ်းနည်း သုံး တယ် လို့ မြင်ဦးမယ်။
တိုက်ယူ တယ် ဆိုတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် က ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပန်းတိုင် ကို ရောက်အောင် စံပြ အနေ နဲ့ ကြိုးစားပြီးပြ တာ ကို ခေါ်မှာပါ။
မြန်မာပြည်မှာ ဒီမိုကရေစီ လိုချင်တယ် ပြောတာ က သူများ ကို ပေးပါ တောင်း နေတာ။
တကယ်ဘဲ ကိုယ်ထိလက်ရောက် စိတ်ဓာတ်ခွန်အား သုံး ကြိုးစားပြီး တိုက်ယူနေတာ မဟုတ်ဘူး။
လူလူချင်းစာနာဖို့ ထားဦး၊ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့် ဘာသာရေး ကိုတောင် ထိဖို့ လုပ်နေပြီ။
လူတန်းစားမရွေး၊ ဘာသာ မရွေး၊ ကျားမ မရွေး အကာအကွယ် ပေးမဲ့ တကဲ့ စစ်မှန် တဲ့ ဥပဒေ ကို အရင် ရဖို့ မကြိုးစားဘူး။
ထွန် က နွား ရှေ့ ရောက်နေတာ ကို မြင်လဲ ဒါ ကို အရင် ပြင်ဖို့ မကြိုးစားကြဘူး။
ဒီအချိန် ၈၈ ကလို တစ်ပြည်လုံး အုံကြွ လာမယ် မတွေးနဲ့။
ဒီမိုကရေစီ မရချင်နေ ဒီအခြေအနေ ပျက်မှာ စိုး တဲ့ လူတွေ ဘယ်နှစ်ယောက် ရှိလဲ အရင် သုံးသပ်ကြည့်ဦး။
တစ်ခုခု ဆို ဘွားတော်ကြီး ခေါင်းပေါ် ပုံပြီး အပြစ်ဖို့ တာ က တော့ It is TOTALLY UNFAIR!!!
ကိုယ်တွေကရော လဲ ကိုယ့်တာဝန်ကိုယ် ကျေလား ပြန်မေးကြပါဦး။
အပြစ်ဖို့ နဲ့ အကြံပေး ထောက်ပြ ကွဲပါတယ် နော်။
ဘိုးတော်ကောင်းမှု အကြောင်းပြု တောင်းဆုပြည့်ပြီး ဆို့ နေတဲ့ သူတွေတို့၊
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးမကောင်းတဲ့ သူတွေတို့ က ကျ
ဘွားတော်လေးကို ပဲ လက်ညှိုးထိုးပြောရဲကြတာ။
အနှစ် ၂၀ အကျယ်ချုပ်တုံးက ဘယ်ရောက်နေမှန်းမသိ မိန်းမ ထမီအောက်က မထွက်နိုင်တဲ့ သူတွေက
ခုကျတော့ လည်း ဝေဖန်တယ် ဝေဖန်တယ်နဲ့
အန်အယ်ဒီဟာ သူတို့ အကြံပေးတဲ့ အတိုင်းမလုပ်ရင် အဝီစိ ဆင်းတော့ မဲ့ အတိုင်း ပြောရဲ သဒတ်!!!!
ယနေ့ နံနက်တွင် ကိုပါကြီး ၏ ဇနီး မသန္တာ မှ ကျိုက္ကမရောမြိုနယ် မြိုမ ရဲစခန်း သို့ သွားရောက်ပြီး ကိုပါကြီး သေဆုံး ရသည့် အကြောင်းရင်းခံ ကို အမှုဖွင့် စုံစမ်းပေးပါရန် ပြောကြားရာ ဒုရဲမှုး တင်ဝင်း မှ အထက်မှ ညွှန်ကြားချက် မရပဲ အမှုဖွင့်၍ မရနိုင်ကြောင်း နိုင်ငံ ရဲ့ အမြင့်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ် ထံသို့ စာတင်ရန်ပြောကြားသည် ဟု သိရပါသည် ။ ၎င်းမှ ထပ်မံ၍ နိုင်ငံတော်မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းစုံစမ်းမှုပြုသည့် အခါမှသာ ရဲစခန်းအနေနှင့်လိုက်ပါဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ် ကြောင်းပြောကြားခဲ့ သည်ဟုသိရသည် ။ ကိုပါကြီးအား ဖမ်းဆီးစဉ် ကရဲတပ်ဖွဲ့ မှ စတင်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီး နယ်မြေခံစစ်တပ်အား လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ။ (၂၆၊၁၀၊၂၀၀၄)
ဒီနေ့ မြို့တော်ခန်းမရှေ့ မှာ လုပ်ခဲ့တဲ့ ကိုမင်းကိုနိုင် မိန့်ခွန်း နားထောင်ရတယ်။
ကိုယ့် အတွက် ကိုယ်ဘဲ ကွက်ကွက်လေးကြည့်ချင်သူများ ပြောပါလေ။
အတိုက်မခံ မပီသ တဲ့ အတိုက်အခံများလို့။
စစ်အစိုးရ ဘက်ကတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ၈၈ ကို အပြစ်တင်နေတဲ့ လေသံ တွေ ရှိနေသမျှ ငါးကြင်းဆီ နဲ့ ငါးကြင်းကြော်
စပ်ဖြီးဖြီး ဒီအတိုင်း ရူးချင်ယောင်ဆောင် နေဦးမှာပါဘဲ။
ဒီတော့ သူတို့ ရူးချင်သလို ရူးနိုင်ဖို့ အတွက် အချင်းချင်း သွေးစည်းမယ် မကြံဘဲ ပွဲလန့်တုန်း ဖျာခင်းပြီး အသံကောင်း လိုလို ဘာလိုလို ဟစ်ပြကြပေတော့။
ပြောသာပြောရ ဒီအချိန်မှာ ဘယ်ဘက်က ဘယ်လို လူတွေ က ဝင်ပြီး ခလောက်ဆန် နေလဲ လဲ မသိနိုင်တော့
ကိုယ့်တာ ကိုယ် လုံအောင် သာ သတိနဲ့ နေဖို့ ရှိတယ်။
ဒီကိစ္စမှာ စစ်တပ်နဲ့ အရပ်သား
ကိုပါကြီး ဇနီးနဲ့ တပ် တို့ ထိပ်တိုက်တွေ့ ပြီ။
အဲဒီမှာ ဘာ တွေ့ မိလဲဆိုတော့
တော်ရုံ ခပ်ညံ့ညံ့ ငြိမ်ခံလိုက်မယ့် မိန်းမစား မဟုတ်
လုပ်ပိုင်ခွင့် ရှိတာကို ထောင့်စေ့စေ့ ချက်ကျလက်ကျ ပြန်တုံ့ပြန်နိုင်တဲ့ သဘော တွေ့ ရတယ်။
အနည်းဆုံးတော့ တရားလက်လွတ် ထင်ရာစိုင်း ရိုင်းတဲ့ကိစ္စကြီးတစ်ခု
တရားနည်းလမ်းမကျတဲ့ ဘက်တော်သားတွေ ဘက်မှာ အနည်းဆုံးတော့ သူတို့နဲ့ တန်တဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကျဆင်းမှုကို ပြန်ရလိမ့်မယ်။
ကိုပါကြီး ရဲ့ ဇနီးးကို အင်တာဗျူးတာလေး ဖတ်ရတော့
အချက်တွေ တွေ့ ရတယ်။
အဲ့ဒီလို ပညာသားပါပါနဲ့သာ တုံ့ပြန်ရင် ရလဒ်က အဆိုးထဲက အကောင်းတစ်ခု ထွက်လာနိုင်တယ်ထင်တယ်။
အဲ. . .တခုတော့ ထပ်တွေးရမယ်။
အစကတည်းးက တွေးမိပြီး သိသိနဲ့ လုပ်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့
အဲဒီလိုသာ ဆိုရင် ကျနော် ထင်နေတဲ့ နောက်အချက်တစ်ခုက မှန်သွားပြီ။
အဲ့ဒီ အထင်က. . . .
.အလွတ်တန်း သတင်းထောက် ကုိုပါကြီး သေဆုံးမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဇနီးဖြစ်သူ မသန္တာက မွန်ပြည်နယ် ကျိုက်မရောမြို့နယ် ရဲစခန်းမှာ အောက်တုိုဘာ ၂၆ ရက်နေ့က အမှုဖွင့် တုိုင်ကြားခွင့် ရသွားပါတယ်။
အဲဒီနေ့ မနက်ပုိုင်းက အမှုဖွင့်တာကုို လက်မခံဘဲ ညနေပုိုင်း နောက်တကြိမ် သွားရောက်မှ သေမှု သေခင်း အမှတ် ၁၁/ ၂၀၁၄ နဲ့ အမှုဖွင့်ခွင့်ရတာ လုို့ ဒေါ်သန္တာက ပြောပါတယ်။
ပုဒ်မ ၁၇၆ အရ သေမှုသေခင်း အမှုဖွင့်ပြီး အလောင်း ကို ပြန်လည်ရ ယူနိုင်ဖို့နဲ့ ပြန်လည် စစ်ဆေးနိုင်ဖို့ကို လည်း တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
တရားလိုဘက် ကနေ ရှေ့နေ ရောဘတ်ဆန်းအောင်က လိုက်ပါ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်။
ကုိုပါကြီး ခေါ် ကုိုအောင်ကျော်နုိုင်ဟာ အဖမ်းခံရပြီး ၁ လနီးပါးအကြာမှာ သေဆုံးသွားပြီလို့ အစိုးရတပ်က ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။
ကိုပါကြီးဟာ မွန်ပြည်နယ်က တိုက်ပွဲသတင်း လိုက်ရင်းနဲ့ စက်တင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့က ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ကုို မြန်မာစစ်တပ်က ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားစဉ် ထွက်ပြေးတဲ့အတွက် ပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရာမှာ သေဆုံးသွားခဲ့တာလို့ အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက် နေ့စွဲနဲ့ မြန်မာဇာနယ်ဇင်းကောင်စီ ယာယီက တဆင့် ဖြန့်ဝေတဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။
တိုင်းရင်းသားတွေကတော့ ရိုးသားတယ် ပြတ်ပြတ်သားသားလုပ်တတ်တယ် သတ္တိရှိတယ်၊ ကိုပါကြီးနှင့် မိသားစုအတွက် အထူးစိတ်မကောင်းပါ…
.ကိုပါကြီးကိစ္စ ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှေ့ဆန္ဒပြသူတွေကို အမှုဖွင့်ပြီ
ဖမ်းသင့်တဲ့ မျက်နှာဖုံးစွပ် တွေ ကျ မဖမ်းရဲ ဘဲ
ဘယ်သူတွေမှန်း သိသူ တွေ ကျ ပြသနာ လုပ် သတဲ့လား။
ဖွတ်ဦးဏှောက် တွေ မြင်ရလေ ကြားရလေ ဒီ လူတွေ အုပ်ချုပ်မှု ကို ခံနေတဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အပြစ်ဖို့မိလေဘဲ။